Lithi aliqondile abakwaZuma ibhange ‘elisabise’ ngokuvala i-account kankosikazi kaMengameli | isiZulu
Bazofaka esebheyili abasolwa ngokuphanga ibhange lakwa-FNB
Ibhange loMbuso lizosebenzisana noMvikeli woMphakathi ngoluthinta u-Absa
Johannesburg – Elinye lamabhange amakhulu kuleli, u-ABSA, ususabise ngokuvala i-account yasebhange kankosikazi kaMengameli Jacob Zuma, uTobeka Madiba-Zuma, ngenxa yezizumbulu zemali ezisolisayo ezilokhu zingena kuyona.
Lokhu kuvele embikweni weSunday Times, nophinde waveza nokuthi leli bhange lifuna ukuthi uMadiba-Zuma achaze kabanzi ngalezi zimali ezinkulu ezilokhu zingena zingenile kwi-account yakhe.
Ngaphambilini leli bhange lavala ama-account ezinkampani zomndeni wakwaGupta ngoFebhuwari 2016. Ngokwesitatimende esifungelwe esafakwa u-ABSA ngoDisemba 2016, leli bhange belilokhu libuyekeza izinkampani ezingena ngaphansi kwencazelo yabantu abasondelene nepolitiki, ngokokulawula kwe-Financial Intelligence Centre (FIC).
Ngaphambilini iSouth African Reserve Bank (SARB) yahlawulisa u-ABSA u-R10m ngonyaka ka-2016 ngokuba ntekenteke kwaleli bhange ekulawuleni okuphathelene nokuthi libheke ngeso lokhozi izimali ezingenayo neziphumayo.
Umbiko weSunday Times uphinde uveze nokuthi ama-account endodana kaMengameli, uDuduzane Zuma, avalwa, nokwaholela ekutheni azincengele ku-Maria Ramos, oyiChief Executive, ukuze amsize.
U-ABSA uphendulile esicelweni seFin24 sokuba uphawule. Okhulumela leli bhange uthe angeke akwazi ukukhuluma ngalolu daba oluthinta unkosikazi kaMengameli Jacob Zuma kanye nendodana yakhe ngenxa yokuthi kuyimfihlo.
“Ikilayenti kuphela elingadalula ukuthi libhanga nobani,” okhulumela leli bhange usho kanjalo.
Umkhulumeli waleli bhange uthe leli bhange alisabisi ukuvala ama-account amakilayenti, kodwa liyawazisa amakhasimende ngesinqumo sokuthi i-account izovalwa.
“Futhi asiphumi iqhubu nomndeni wakaZuma njengoba udaba lubeka kanjalo. Asiphumi iqhubu namakhasimende,” kusho lo mkhulumeli engeza ngokuthi bona balawulwa imigomo kanye nomthetho wokusebenza kwamabhange.